November 14, 2020 - Achawlaymyar
ဝကျခွံကငျးစငျပွီး ညီညာတဲ့ အသားအရညျဖွဈအောငျ……
November 14, 2020 by Achawlaymyar
ယောကျာ်းဖြစ်စေ မိန်းမဖြစ်စေ တကယ်ချစ်ကြတယ်ဆိုရင် အတိတ်က အမှားတွေကို လက်ညှိးထိုး ပြောဆိုတာမျိုး မလုပ်ရဘူး
ယောကျာ်းဖြစ်စေ မိန်းမဖြစ်စေ တကယ်ချစ်ကြတယ်ဆိုရင် အတိတ်က အမှားတွေကို လက်ညှိးထိုး ပြောဆိုတာမျိုး မလုပ်ရဘူး တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင် သူမှားနေရင်တောင်မှလက်ခံနားလည် ပေးရမှာပဲ။ ချစ်သူ/ရည်းစားရယ်လို့ ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တစ်ယောက်သိက္ခာကို တစ်ယောက်ကကာကွယ်ပေးရမယ်။ အပုပ်မချသင့်ဘူး။ လူတိုင်းဟာ အတ္တသမားချည်းပဲ။သူ့အတ္တကို ထိပါးလာတာ လူတိုင်းမကြိုက်ကြဘူး။ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာ ဒီအချက်ကသိပ်အရေးကြီးတယ်။ဆိုပါတော့… ထောင်ကျနေတဲ့ လူတွေကိုခင်ဗျားမှားတယ်လို့ သွားပြောရင်ဘာပြန်ပြောမယ်ထင်လဲ။ “တကယ်က ကျွန်တော် လူမှားပြီး တရားစွဲခံခဲ့ရတာပါ”“တရားသူကြီးက လာဒ်စားလို့ပါ” “ကျွန်တော် ဘုရားမကြိုက်တာ မလုပ်ခဲ့ပါဘူး”ဆိုတဲ့အဖြေပဲ ပေးကြလိမ့်မယ်။လူ၁၀၀မှာ ၈၀လောက်က ဝန်ခံရဲကြမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါဟာ ဘာလို့လဲဆိုတော့ လူတိုင်းဟာ မိမိအတ္တကို မိမိကာကွယ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိလို့ပဲပေါ့။ချစ်သူ/ ရည်းစား အချင်းချင်း ကွယ်ရာမှာတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် မကောင်းကြောင်းပြောဆိုနေရင် ဒါဟာ တကယ်ချစ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆလို့ရပါတယ်။ ချစ်နေဆဲအချိန်မှာမြုံထားကြပေမယ့် ပြဿနာဖြစ်ကြတဲ့အခါအချင်းချင်း ငယ်ကျိုးငယ်နာတွေ ဖော်ကြမယ်ဆိုရင်ဘယ်မှာ ငြိမ်းအေးမှု ရှိပါတော့မလဲ။အမှားကင်းတဲ့ လူရယ်လို့ ဒီလောကမှာ … Read more
သင်တို့နှစ်ယောက် လမ်းခွဲသင့်ပြီ ဆိုတာပြနေတဲ့ အချက်များ…
သင်တို့နှစ်ယောက် လမ်းခွဲသင့်ပြီ ဆိုတာပြနေတဲ့ အချက်များ… တစ်ခါတစ်လေမှာ ဘယ်လောက်ပဲ ချစ်ခဲ့ကြတယ် ပြောပြော စိတ်သဘောထား တိုက်ဆိုင်မှုတွေ၊ နားလည်မှုတွေ မရှိတော့ရင် အဲ့ဒီဆက်ဆံရေးကို ဒီနေရာမှာ အခုပဲ ရပ်တန့်လိုက်သင့်ပါပြီ။ ဒီလိုမျိုး မပြေလည်တာတွေကို အတင်း အဆင်ပြေအောင် ကြိုးစားမိတဲ့အခါ နှစ်ယောက်လုံးမှာ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေပဲ များလာတတ်ပါတယ်။ အခုဖော်ပြပေးမယ့် အချက်တွေကို သင်တို့နှစ်ယောက် ကြုံနေရပြီဆိုရင်တော့ သင်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ဆက်ဆံရေးကို အခုပဲရပ်တန့်သင့်ပါပြီနော် …။ စိတ်သဘောထားချင်း မတိုက်ဆိုင်တော့ဘူး… အရင်ကတော့ ကိုယ်မကြိုက်ပေမယ့် သူကြိုက်တဲ့အတွက် သူစိတ်ချမ်းသာအောင် လိုက်လျောပေးခဲ့ရတဲ့ အချိန်လေးတွေရှိဖူးကြပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် အချိန်ကြာလာတဲ့အခါ သူ့အကြိုက်၊ ကိုယ်အကြိုက် မတူညီတာတွေ များလာပြီး ပြသနာသေးသေးလေး ကနေ အကြီးကြီးထိ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ညှိမရတော့ပဲ လုံးဝကို သဘောထား … Read more
ယခုခေတ် လူငယ် ကျား/မ မရွေး ပြီးဆုံးအောင်ဖတ်ပေးကြ​စေလိုပါတယ်​​နော်​…
” ဟျောင့် ငါ့စော်ဆီကအဖြေရပြီကွ ” …. ” ဟုတ်လား ” Congrats သားကြီး တစ်ဝိုင်းတော့လုပ်လိုက်တော့ လအန ည်းငယ်အကြာ……။ ဟျောင့် မင်းစော်နဲ့ ဘယ်အခြေအနေ ရောက်နေပြီလဲ ” ပြောစမ်းပါဦး ” …. ဒီလိုပါပဲကွာ ” အဆင်ပြေပါတယ် ” ငါမေးတာက ဟိုဟာဒီဟာလုပ်ပြီးပြီလား ….. ” ဟာ ” မဖြစ်ရသေးပါဘူးကွာ ဒီတိုင်း ရိုးရိုးသားသားပဲချစ်ကြတာပါကွ..။ မင်းကလဲ ညံ့လိုက်တာကွာ ဒီခေတ်က ကိုယ်မစားရင် ” သူများစားတဲ့ခေတ်ကွ ” …. ” ဟင် ” ဟျောင့် ဘာဆိုင် လို့လဲကွ… ” အေးမှတ်ထား ” ဒီခေတ်က အပျိုရှားသွားပီ ကိုယ်မလုပ်လဲ ကိုယ်နဲ့ပြတ်ရင်လဲ … Read more
ပထမဆုံးချိန်းတွေ့ချိန် အမျိုးသားတွေပြောတဲ့စကားလုံးတွေထဲက သတိပြုစရာ လက္ခဏာများ……
ပထမဆုံး ချိန်းတွေ့မှု ဆိုတာ အလုပ် အင်တာဗျူး တစ်ခုကို သွားဖြေရတာနဲ့တူပါတယ်။ သင့်ရဲ့အနာဂတ် မှာ အဆင်ပြေတဲ့ အချစ်ရေး တစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ချင်လျှင် အိမ်ထောင်ဖက် အကြောင်းကို သေချာစေဖို့ ပိုပြီးလေ့လာဖို့ကြိုးစားပါ။ သင်သည် သူပြောတာကို ဂရုတစိုက် နားထောင် ဖို့နဲ့လိုအပ်တဲ့ အသေးစိတ် အချက်အလက် များကို အာရုံစိုက်ပေးနိုင်လျှင်ဘယ်မေးခွန်းမှ မလိုအပ်ပါဘူး။ အမျိုးသား တစ်ယောက်ရဲ့ စကား ပြောဆိုမှုမှာ မကြာခဏ ထပ်တလဲလဲ အများဆုံးပြောတဲ့ အကြောင်းအရာများကို သတိပြုပါ။ သူ့ရဲ့စကားပြောဆိုမှုမှတဆင့် သူ့အကြောင်းများကိုလေ့လာအကဲခတ်နိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာမှ ဒီသတိပြုစရာလက္ခဏာများက မှားယွင်းတဲ့ အိမ်ထောင်ဖက် ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ညွန်ပြပေးနေပါတယ်။ ၁။ သူ့ ရည်းစားဟောင်း အကြောင်း ကိုယ်နဲ့ ချိန်းတွေ့တဲ့အချိန်မှာ သူ့ ရည်းစားဟောင်း အကြောင်းကို ပြောနေပြီဆိုရင်တော့ အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး။ ချိန်းတွေ့မှုမှတဆင့် … Read more
မိတ်ဆွေများအတွက် အလျင်မြန်အကျိုးထူးကို ရရှိစေမည့် နှင်းဆီ ဆယ်ခက်…….
ထူးထူးခြားခြားအကျိုးပေးပြီး ကံပွင့် လာဘ်ပွင့်ကာ ဝင်ငွေတိုးချင်တဲ့ ခုနှစ်ရက်သားသမီး မိတ်ဆွေများအတွက် အလျင်မြန်အကျိုးထူးကို ရရှိစေမည့် နှင်းဆီ ဆယ်ခက် စီးပွားတက် အဓိဋ္ဌာန် စခမ်းဝင်နည်း။ နှင်းဆီပန်း (၁၀) ပွင့် (ဘာအရောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်)ကို ဆူးမပါအောင် သေချာသန့်စင်ပြီး အိမ်ရှိ ဘုရားကျောင်းဆောင်ရှေ့မှာ စာပွဲအမြင့်ပေါ်တင်ပြီး ကပ်လှူပါ။ ပြီးလျှင် သံဃာ့မဟာနယက ဥက္ကဋ္ဌ ဗန်းမော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးချီးမြှင့်သည့် ဘုရားဂုဏ်တော်ဆယ်ပါးဂါထာကို ဂုဏ်တော်တစ်ပါးလျင် ပုတီး (၁)ပတ်စိပ်ရပါမည်။ ဂုဏ်တော်တစ်ပါးစီ၏ အရှေ့မှ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ ကိုထည့်၍ ရွတ်ဆိုရပါမည်။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ အရဟ။ံ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေါ ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္မန္ဒော သုဂတော လောကဝိဒူ အနုတ္တရော ပုရိသဒမ္မသာရထိ သတ္ထာဒေဝမနုဿာနံ ဗုဒ္ဓေါ ဘဂဝါ ကိုယ်လက်သန့်စင်ပြီး သန့်ပြန်တဲ့ အဝတ်အထည်ကိုလဲလှယ်ပါ အချိန်မှန်အောင်လည်းဂရုစိုက်ပါ။ … Read more
သရုပျဆောငျနခွေညျရှနျးလကျရဲ့ အသကျ(၂၁)နှဈပွညျ့မှေးနအေ့လှုအဖွဈ Covid -19ရောဂါကုသရေး(ဧရာဝတီစငျတာ)မှာအလှုငှလောရောကျလှုဒါနျးခဲ့တဲ့ပုံရိပျမြား …
သရုပျဆောငျနခွေညျရှနျးလကျရဲ့ အသကျ(၂၁)နှဈပွညျ့မှေးနအေ့လှုအဖွဈ Covid -19ရောဂါကုသရေး(ဧရာဝတီစငျတာ)မှာအလှုငှလောရောကျလှုဒါနျးခဲ့တဲ့ပုံရိပျမြား …အခုလို မှေးနမှေ့ာ လှူဒါနျးရတဲ့ အကြိုးကွောငျ့ ဆကျလကျလြောကျ လှမျးမဲ့ အနုပညာလမျးကွောငျးပျေါမှာ အောငျမွငျမှူတရေပါစနေောကျနှဈတတေိုငျးလညျး ဒီထကျမက လှူဒါနျးနိုငျပါစေ..အရမျးဝမျးသာကွညျနူးစရာကောငျးသော အလှူလေးပါကိုယျတတျနိုငျတဲ့ဘကျကနပေီး covid-19 စငျတာမှာ တတျအားသမြှ သဒ်ဒါတဈအား ပါဝငျကူညီလှူဒါနျးပေးသောမှနေ့ရှေ့ငျလေး သရုပျဆောငျ နခွေညျရှနျးလဲ့ ရေ သာဓု သာဓု သာဓု ပါ…. Crd#Photo Kaung Sat zawgyi, သရုပ်ဆောင်နေခြည်ရွန်းလက်ရဲ့ အသက်(၂၁)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလှုအဖြစ် Covid -19ရောဂါကုသရေး(ဧရာဝတီစင်တာ)မှာအလှုငွေလာရောက်လှုဒါန်းခဲ့တဲ့ပုံရိပ်များ …အခုလို မွေးနေ့မှာ လှူဒါန်းရတဲ့ အကျိုးကြောင့် ဆက်လက်လျောက် လှမ်းမဲ့ အနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာ အောင်မြင်မှူတေရပါစေနောက်နှစ်တေတိုင်းလည်း ဒီထက်မက လှူဒါန်းနိုင်ပါစေ..အရမ်းဝမ်းသာကြည်နူးစရာကောင်းသော အလှူလေးပါကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပီး covid-19 စင်တာမှာ တတ်အားသမျှ သဒ္ဒါတစ်အား ပါဝင်ကူညီလှူဒါန်းပေးသောမွေ့နေ့ရှင်လေး သရုပ်ဆောင် နေခြည်ရွှန်းလဲ့ ရေ သာဓု … Read more